दलहरूको अग्निपरीक्षा - Naya Patrika
काठमाडौं | माघ ०८, २०७४
दलीय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने दलहरूले त्यसभित्र पनि आ–आफ्नो गुटको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन् भने गुटको स्वार्थभित्र पनि व्यक्तिगत, पारिवारिक र नातागोताको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन्
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम सुरु भएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा), संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति, साझा विवेकशील पार्टी र राप्रपालगायत दलले आ–आफ्नातर्फबाट निर्वाचनको मैदानमा उम्मेदवार उतारेका थिए ।
सबै दलले आ–आफ्ना घोषणपत्र पनि जनताबीच प्रस्तुत गरे । सबै दलको आ–आफ्नै आँकलन पनि थियो । सबै दलले आ–आफ्नो पक्षमा मत तान्नका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गरे । निर्वाचन सम्पन्न भयो । मतगणनासँगै परिणाम पनि आयो । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा एमालेले विजय हासिल गर्‍यो । दोस्रो बढी संख्यामा स्थानीय तहमा कांग्रेसले विजय हासिल गर्‍यो । तेस्रोमा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गर्‍यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि लगत्तै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आयो । सबै दलले आ–आफ्ना उम्मेदवार छनोटदेखि दलबीच गठबन्धनका प्रयास गरे । एमाले र माओवादीलगायत केही वामपन्थी पार्टी मिलेर वाम गठबन्धनको घोषणा मात्र गरेनन्, उनीहरूले त्यसैअनुरूप मिलेर सिट बाँडफाँड पनि गरे र उम्मेदवार पनि घोषणा गरे ।
उनीहरूले निर्वाचनका लागि एउटै घोषणापत्र पनि तयार गरे । साथै, एमाले र माओवादीले पार्टी एकतासम्म गर्ने भनेर संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै गरे । त्यसपछि कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गर्‍यो । नेपालमा निर्वाचनअगाडि नै गठबन्धन संस्कृतिको विकास भयो । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा वाम गठबन्धन चुनावमा विजय हासिल गर्न सफल भयो । दुई नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले राम्रो परिणाम हासिल गर्न सफल भयो ।
कांग्रेसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा उत्साहजनक परिणाम हासिल गर्न सकेन । अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न हुन र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको अन्तिम परिणाम घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । त्यसपछि सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
अब यो लगभग निश्चितजस्तै छ कि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको अन्तिम परिणाम घोषणापछि संघ (केन्द्र) मा वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ । त्यसैगरी ६ वटा प्रदेशमा पनि वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ ।
प्रदेश नं. २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धन भयो भने उनीहरूका तर्फबाट नै प्रदेशमा सरकार निर्माण हुन्छ । कांग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनादेश प्राप्त भएको छ । कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ राम्रो मत परिणाम हासिल गरेको छ ।
पहिलो संविधानसभाले निर्माण गर्न नसकेको संविधान कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा निर्माण भयो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तह र प्रतिनिधिसभा तह गरी तीन तहको निर्वाचन हुन आवश्यक थियो ।
यी तीनै तहको निर्वाचन कांग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ र संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक अघि बढेको छ । सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर तीनै तहको निर्वाचन गर्नु अत्यन्त जटिल कार्य थियो, जुन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको संघात्मक शासन प्रणाली एउटा अवसर र चुनौतीको रूपमा रहेको छ । संक्रमणकालमा रहेको नेपाल नयाँ संविधान कार्यान्वयन सँगसँगै संक्रमणकालको चरणबाट मुक्त भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहका अधिकारबारे स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेश तहका संयुक्त अधिकार, प्रदेश तह र संघीय तहका संयुक्त अधिकारका साथै स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहका संयुक्त अधिकार पनि संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । नेपालका नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार र राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारका विषयमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्टसँग लेखिएको छ ।
संविधान निर्माणको समयमा त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने दल र हस्ताक्षर नगर्ने दलबीच अहिले पनि केही विषयगत मतभिन्नता छन् । अब ती मतभिन्नतामा भएका समस्यालाई संविधानतः समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि तिनै दलको काँधमा आएको छ ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यसले विविधतालाई स्वीकार गरेको हुन्छ । सहमत हुने पक्षको मात्र होइन, यसले असहमत हुने पक्षलाई पनि विधि र कानुनले संरक्षण गरेको हुन्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा असहमति राख्ने पूर्ण अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।
अहिले पनि संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गराउन राजनीतिक दलबीच संवाद, सहमति र सहकार्य गर्नैपर्ने परिस्थितिजन्य बाध्यता छ । यसलाई कसैले पनि विजयको उन्मादमा उपेक्षा गर्नु गम्भीर भुल हुनेछ । नेपालका राजनीतिक दलले कतिपय समयमा आफ्नै र अरू कसैको गल्तीको कारण कठिन समय भोगेका छन् भने कतिपय कठिन समयमा पनि दलहरू मिलेर देशमा भएको जटिलभन्दा जटिल समस्याको समाधान निकालेका छन् ।
अहिले समय आएको छ कि स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा भोलिका दिनमा आउन सक्ने जटिल समस्याको समाधान पनि दलहरू मिलेर नै गर्नुपर्नेछ । यसैले दलबीच अहिले पनि संवाद भइरहनुपर्छ ।
नेपालका दलहरूको सबैभन्दा गम्भीर गल्ती भनेकै राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुको सट्टा दलहरूले आ–आफ्नो दलीय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन् । दलको स्वार्थभित्र पनि आ–आफ्नो गुटको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन् र आ–आफ्नो गुटको स्वार्थभित्र पनि आ–आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक र नातागोताको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन् ।
यसले के दर्साउँछ भने बाहिर कुरा आदर्शको गर्ने अनि भित्र आफू र आफ्नो परिवार वा नातागोताको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने परिपाटीले जनताको विश्वास नेताहरूप्रति कम हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
मूलतः देशमा विद्यमान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खानेपानीका समस्या दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन् । किसानहरू ऋणमा डुबिरहेका छन् । उद्योगपतिहरू ऋणमा डुबेर उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगिरहेका छन् ।
रेमिट्यान्स घट्दै गइरहेको छ र देशभित्र आफ्नो उत्पादन नभएको कारणले देशमा आएको रेमिट्यान्सको ९५ प्रतिशत रकम विदेशबाट देशमा सामान आयात गर्न पुनः विदेशमै गइरहेको छ । देशभित्र भ्रष्टाचार गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको छ र भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा फैलिएको छ ।
सुशासनको अनुभूति आमनेपालीले गर्न पाएका छैनन् । देशभित्र आमनागरिकमा निराशा व्याप्त छ । दलबीच अविश्वास र अभिमानको दूरी घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो गम्भीर निराशाको वातावरण र अधिकारको मात्र खोजी गर्ने मानसिकताबीच दलहरूले संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
आमनागरिकको आशा र विश्वासको केन्द्रबिन्दुमा रहेका दलले उनीहरूको आशा र विश्वासलाई यथार्थमा बदल्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले आमनेपालीलाई यो संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराएर बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएको शासकीय स्वरूपको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु छ ।
अन्त्यमा, दलहरूले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक समस्यालाई सामाधान गर्ने अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपरेको छ ।
(गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)
भिएस नैपल : एउटा अनौठो क्रूर साथी
लोपोन्मुख वन्यजन्तु जोगाउने कसरी ?
धोबीखोला बस्तीमा पस्यो
स्थानीय तहमा १४३४ स्वास्थ्यको दरबन्दी थप्ने तयारी
एसियाडमा पदक संख्या बढ्ने अपेक्षा
बुधबार २.४३ प्रतिशतले बढ्यो नेप्से
इरफानले छाडे गोर्मिन्ट
तीन चिनी उद्योगसँग २१ मेगावाट विद्युतकाे पिपिए साताभित्रै